XOG: Farmaajo oo Somaliya geliyay Dacwad ku saabsan Heshiis Shidaal iyo Halistiisa - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. XOG: Farmaajo oo Somaliya geliyay Dacwad ku saabsan Heshiis Shidaal iyo Halistiisa - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Dowladda Soomaaliya ayaa wajaheysa dacwad iyo muram sharciyeed oo ku saabsan Heshiis Shidal baaris oo lala saxiixday shirkad laga leeyahay dalka Mareykanka.
Heshiiska oo magaalada Istanbul lagu saxiixay Bishii Febraayo 2022, ayaa dhaliyey muran ku saabsan sax ahaanshaha heshiiskii shidaal baarista, waxaana arrintan ay ka mid tahay dhibaatooyinka waaweyn ee laha dhaxlayo madaxweynaha muddo xileedkiisu dahmamaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Wasiirka Batroolka iyo Macdanta ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed, iyo Richard Anderson oo ah madaxa fulinta ee shirkadda Coastline Exploration Ltd., ayaa heshiiska wada saxiixay. Maxamed C/llaahi Maxamed (Farmaajo) oo loo yaqaanno Farmaajo iyo Maxamed Xuseen Rooble ayaa labadaba iska fogeeyay oo ku gacan seyray heshiiskaas, kuna tilmaamayn mid aan waxba ka jirin.
Waxaa amar lagu siisay Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud inuu baaritaan ku sameeyo qandaraaska, isla markaana uu qaado tallaabooyinka sharciga ah ee ku habboon. Xeer ilaaliyaha ayaa u yeeray Wasiirka Batroolka si wax looga weydiiyo heshiiska.
Xukuumaddu waxay ku doodeysa inaan la raacin habraac sax ah; sidaas darteed, heshiisku waa “wax aan waxba ka jirin,” sida ku cad warqad 21-kii February ay Wasaaradda Arrimaha Dibadda u dirtay Shirkadda.
Dhinaca kale madaxa fulinta ee shirkadda Coastline Exploration Ltd. Richard Anderson ayaa difaacay Heshiiska, isagoo ku dooday inuu sax yahay sharcinimada heshiiska.
“Waxaan si adag u aaminsanahay in PSA-yada (heshiisyada wax-soo-saarka) ee aanu saxeexnay ay sharci ahaan ansax yihiin oo ay si buuxda u hirgalayaan,” ayuu yiri Richard Anderson oo wareysi uu siiyey VOA-da.
Wuxuu cadeeyay ka hor inta aanan la saxiixin PSA-yada bishii Febraayo, inay la tashi la sameeyeen Wasaaradda iyo Hay’adda SPA (Hay’adda Batroolka Soomaaliyeed), waxaana naloo xaqiijiyey in Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha labaduba ay ka war-hayeen qaabka wax u socdaan, isla markaana ay raali ka ahaayeen saxiixa”.
Waxa uu qiray in Sahaminta Xeebta aysan si toos ah ula xiriirin Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha midkood, balse wuxuu sheegay in Wasiirka Batroolka iyo xubno ka tirsan HBS ay u xaqiijiyeen in labada hoggaamiye ay ka warqabaan.
Richard Anderson ayaa sheegay in “heshiiska’ uu cadaalad u yahay Soomaaliya. “Waxaa jira 5% royalty oo si toos ah uga soo baxa meesha ugu sareysa. Faa’iidada ayaa loo qaybiyaa 50-50. Waxaa jira 30% canshuurta dakhliga ee wax kasta oo faa’iido ah qandaraaslaha. Waxaa jira faa’iidooyin dhaqaale oo kala duwan oo Soomaaliya ugu jira heshiiska”.
Marka loo eego Anderson, dhammaan shuruudaha PSA-yada, oo ay ku jiraan boqolkiiba faa’iidada wadaagga, waxay go’an yihiin muddada 30-sano mana isbeddeli doonaan inta lagu jiro jiritaanka Qandaraaska.
Heshiiskan ayaa mugdi lagu galay xilli uu dalku ku jiro doorasho, waxaana uu dhacay iyadoo sanadkii hore, dowladda Soomaaliya looga digay inay gasho heshiisyada shidaalka. Digniintaas oo ka timid Kooxd maamulka maaliyadda (FGC), koox khubaro ah oo ka kooban wasiirka maaliyadda Soomaaliya, xildhibaanno iyo xubin ka tirsan Bankiga Adduunka.
Heshiiskan wuxuu soo nooleeyay khatarta mustaqbalka sharci iyo/ama dacwad magdhow ah oo ka dhan ah DFS (Dowladda Federaalka Soomaaliya).
Previous articleRW Rooble oo ka dhoofay Magaalada Muqdisho iyo Ujeedada Safarkiisa
Next articleItoobiya oo qabatay Koox Alshabab ah oo Weerarro u Qorsheynaysay Addis Ababa